Ohloniphekileyo Umfazi omncinci otyebileyo-217 obomvu okhanyayo Uthando 153CM Okwenyani ngokwesondo uDoll Kayla
Iidoll zesini ze-TPE,Amabele amakhulu esini,Oonodoli besini abancinci
I-Kayla 153CM TPE Intloko encinci umfazi otyebileyo-217 ukukhanya omdaka ohloniphekileyo we-TPE ngesondo unodoli
Imbali yemvelaphi kaKayla:
U-Kayla unodoli wesondo we-TPE kunye nobude be-153cm. Kufana nesikere, kodwa kungaphezulu koko. Beka unodoli wakho wesondo ecaleni kwakhe, kwaye uphakamise ingalo yakhe yasekunene okanye yasekhohlo ngqo kwisilingi. Leliphi icala ofuna ukuba unodoli wakho wesini ajike liya kugqiba ukuba yeyiphi ingalo oza kuyiphakamisa. Goba imilenze kanodoli kwi-angle ye-45-degree ukusuka ezinqeni nasemadolweni. Emva kokuba ubeke unodoli wakho kule ndawo, mfake ecaleni kwaye uhlukanise imilenze yakhe. Ngoku ungatyibilika ngokulula kuloo ndawo.Beka unodoli wakho wesondo kwindawo ehleliyo kwaye uqinisekise ukuba uhleli nkqo kwi-angle ye-90 degree. Yandisa imilenze yakho kwaye uyinqumle. Yandisa izandla zoonodoli emacaleni nasemva, okanye unokuncika unodoli eludongeni okanye ecaleni kwebhedi ukuze uqinisekise ukuzinza kunye nokulinganisela kule meko. Ukusuka apho, unokutyibilika ngokulula kuloo ndawo kwaye ubeke imilenze yakho kumagxa kanodoli.
Imbali yemvelaphi yaseKamila: I-Kamila iyidoli yesondo ye-TPE enobude be-170cm.Abantu abaninzi bafuna ukwazi ukuba impendulo yalo mbuzo ingaba yintoni. Ngaba ukuba neentlobano zesini nonodoli wesondo kuvakala kusengqiqweni? Ngaba kungcono okanye kubi ngaphezu kokulala nomfazi wokwenene? Ngaba unokumanga unodoli wakho wesondo okanye uzame iindlela ezahlukeneyo? Yena...
UMarley 158CM C-Cup XY Unodoli weSilicone weNtloko yoBuso S Makeup EVO Skele ...
Imbali yemvelaphi kaMarley: UMarley ngunodoli wesondo we-TPE ubude be-158cm. Ziyeyona ndlela ibalaseleyo yokuba abantu baqonde ukuba bajongeka njani xa bevuswa kunye nendlela abasabela ngayo kwizivuseleli. Oku kubavumela ukuba bazame iimpahla ezahlukeneyo kunye nezikhundla ezahlukeneyo zesini ukufumanisa ukuba yintoni efanele ...
UVanessa 168CM C-Cup FU Unodoli weSilicone Intloko ubuso obuEnchanting S yenza ...
Ibali lemvelaphi kaVanessa: UVanessa unodoli we-TPE wesondo kunye nobude be-168cm.Abanye abantu bakholelwa ukuba olu hlobo lokuzonwabisa alufanelekanga kwisizukulwana esincinci, kwaye olu hlobo oluthile lokuzonwabisa lulungiselelwe abantu abadala abafuna ukuzonwabisa kwabantu abadala. Ingxabano apha kukuba i-porn...
ULeila 161CM Amabele amakhulu FU Unodoli weSilicone Intloko esinqeni esibhityileyo ubuso S ...
Ibali lemvelaphi kaLeila: ULeila yidoli yesondo ye-TPE enobude be-161cm.Into engafanelekanga yeepopi ze-silicone yixabiso, kodwa kufuneka uhlawule umgangatho. Ikwanzima kwaye yomelele kune-TPE. Oku kuthetha ukuba ezinye iindawo aziguquki kakuhle kunye nokucudisa. Ngokubanzi, zombini i-TPE ...
Arabella 158CM C-Cup FU Unodoli weSilicone Intloko ubuso Iinkophe ezinde S ...
Imbali yemvelaphi yaseArabella: I-Arabella iyidoli yesondo ye-TPE enobude obuyi-158cm.Iidoli zothando zokwenene aziyonto ithengwa ngamadoda, ngenxa yokuba abafazi banokuthenga noonodoli abafana nobomi ukuze bafumane ingcamango yabo. Yonga imali kunye nezixhobo ngoonodoli bothando: Oonodoli bokwabelana ngesondo yenye yezona zinto zilungileyo zokuphulula amalungu esini, ...
Ruth 165CM G-Cup Silicone Intloko jikelele esifubeni No. 7 Wig version l ...
Ibali likaRuth imvelaphi: URute unodoli wesondo we-TPE kunye nobude be-165cm.Ngenxa ye-atrophy ye-muscle, i-muscle contractility, ukuguquguquka kunye nokunyamezela kuyancitshiswa, ngoko kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukugcina amandla emisipha ngemisebenzi efanelekileyo. Ngenxa yokuqina kwemisipha kunye nokuguquguquka kwabantu abadala, ...
Aspen 160CM H-Cup Irontech Silicone Head Bold Playful Silicone S ...
Ibali lemvelaphi ye-Aspen: I-Aspen iyidoli ye-Silicone yesondo kunye nobude be-160cm. Baza ngokwesini ezahlukahlukeneyo, ubukhulu, ukubonakala kunye nobuntu. Kwabatshatileyo abafuna ukuhlola kodwa abafuni ukukopela, ukulala ngesondo nonodoli kunokuba lukhetho oluhle. Ikwayinto engaqhelekanga kakhulu enokwenza isondo sakho ...
Ibali le-Alexa lemvelaphi: I-Alexa iyidoli ye-Silicone yesondo kunye nobude be-162cm.Bend idoli yakho emadolweni ukuze ufanise i-sexy. Beka iingalo zakhe phezu kwentloko yakhe ukugcina ulungelelwano lwakhe. Emva kokugqitywa, kukulungele ukulungisa idoli kwaye uthathe i-posture eqhelekileyo. Ngale ndlela unokunqanda naliphi na ixesha elide ...
Elaina 161 CM F-Cup Irontech Asian Young Woman Style Amabele amakhulu ...
Imbali yemvelaphi ka-Elaina: U-Elaina unodoli wesondo we-TPE kunye nobude be-161 cm. Ukukhohlisa ngokweemvakalelo kunokuba buhlungu kwaye kubuhlungu njengokukhohlisa ngokomzimba, kodwa xa ukungathembeki kubandakanya zombini, intlungu ayinakuphepheka ngokupheleleyo. Oonodoli bezesondo ngokuqinisekileyo ngabona balingane bathembekileyo, akufuneki ube nexhala malunga ...
Kali 159CM isimbo saseAsia E-Cup Irontech uthixokazi oneCurly Ha ...
Ibali lemvelaphi ye-Kali: I-Kali iyidoli ye-TPE yesondo kunye nobude be-159cm. Abavelisi be-doll ye-Sex ngoku bayakwazi ukubonelela abathengi ngeedoli zesondo ngokuchanekileyo njengabasetyhini bokwenene. Kuye kwabonwa ukuba abantu abaninzi abanakuyamkela ingcamango yoonodoli besini; nangona kunjalo, imfuno yoonodoli besini iyaqhubeka ikhula. Ho...